5 Layli ka dhan ah Murqaha Murqaha garabka iyo garbaha | Layliska dharka, kala bixin +
5 Layliyo ka dhan ah Murqaha Murqaha garabka iyo Garabka
26 / 03 / 2017 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Miyaad toosinaysaa adigoo qoorta adag? Garbahaaguna badanaa miyaa kor u kaca dhegahaaga?
Kadib isku day shantaas jimicsi ee kaa caawin kara inaad debciso xiisadda murqaha isla markaana adkaysid muruqyada qoorta iyo garabka. Xor baad u tahay inaad la wadaagto saaxiib qof qoorta ka dhib badan.
Halkan waxaa ah 5 layli oo adkayn kara muruqyada ciriiriga ah, kordhin kara wareegga dhiigga oo gacan ka geysan kara dhaqdhaqaaqa badan ee muruqyada iyo kala-goysyada. Muruqyada adag iyo murqaha qoorta iyo garabka waa caadi. Layligani waxay kaa caawin karaan inaad yareyso murqaha murqaha ee aad dhisto maalintii oo dhan. Jimicsigu waa inuu ku habboon yahay caafimaadkaaga.
Daaweynta waxaa looga baahan karaa rugaha caafimaad ee shati siisay oo ay weheliso tababbarka horumarinta fiicnaanta. 5-ta layligani waxay si gaar ah diiradda u saarayaan kordhinta dhaqdhaqaaqa iyo furfuritaanka xiisadda murqaha. Xusuusnow inaad nala soo xiriirto boggayaga Facebook hadaad hayso ra'yi ama faallooyin.
Talo: Hoos kadhageyso si aad u daawato fiidiyoow tababbaran oo leh jimicsi dhaqdhaqaaq oo wax ku ool ah kuna fidsan qoorta adag
Shantaas jimicsi iyo jimicsiga fiditaanku waxay kaa caawin karaan inaad jilciso murqaha qoorta dheer qoortaada iyo garbahaaga. Laylisyada waxaa loo habeeyey si ay si wanaagsan ugu maareeyaan maalin kasta iyo kooxaha oo dhan. Hoos guji si aad u aragto layliyada.
Sidoo kale akhri: Maxay Tahay Inaad Ka Ogaato Xanuunka Garabka
1. "Bisad iyo Geel"
Jimicsiga "bisadda iyo geela" waa layli abaabul wanaagsan oo wanaagsan oo siiya dhaqdhaqaaq badan lafdhabarta oo dhan. Waxaa loo magacaabay maxaa yeelay dhabarka ayey u duqeysaa sidii bisad oo gadaasheedna waxay u oggolaataa dhabarkiisa inuu u qoto dheer sidii geel. Wuxuu fidiyaa wuxuuna siinayaa dabacsanaan badan xagga dhabarka, feeraha iyo qoorta. Waa jimicsi cajiib ah oo loogu talagalay kuwa u baahan inay jilcaan adkaanta qoorta iyo garbaha.
Waa tan sida loo sameeyo layliga: Bilow inaad ku taagnaato afarta dhinacba, ka dibna dhabarkaaga u dhig si tartiib ah dabaqa kahor aayar, laakiin si adag ugu riix dhabarkaaga dhanka saqafka. Ku soo celi jimicsiga 8-laab oo kabadan 10-3 goosgoos ah.
Trapezius waa muruq u xilsaaran kor u qaadista garbaha. Markaa markii maalin dheer ka dib aad dareento in garbahaaga la sudhay dhegahaaga hoostooda - markaa si toos ah waad u eedeyn kartaa iyaga. Layligani wuxuu xaqiijinayaa inaad si joogto ah u kala fidiso kooxdan muruqyada ah taasoo caan ku ah waxtarka qoorta iyo madax xanuun adag.
3. Fidinta dhabarka sare iyo qoorta
Qoortaadu ma dareemaysaa inaad madaxaaga sudhan tahay maalintii oo dhan? Waxaa laga yaabaa inaad ku haysatid shaashadda PC-ga hortiisa? Kadib jimicsigan yoga waa adiga. Jagadan yoga waxay furaysaa laabta, kala bixisaa muruqyada caloosha waxayna u dhaqaajisaa dhabarka hab wanaagsan.
Waa tan sida loo sameeyo layliga: Ku billow inaad si siman dhulka u seexato iyadoo calaacashaadu hoos u dhacayso sagxadda feedhaha dhexdeeda. Ka dib lugahaaga isku soo wada xoori oo riix dusha cagahaaga oo sagxadda dhulka ku garaacda - isla mar ahaantaana u isticmaal xoogga dhabarkaaga, ee ha u isticmaalin gacmahaaga, si aad xabadka uga saarto sagxadda - waa inaad dareentaa inay waxyar u kala fidsan tahay xagga dambe - hubi inaadan wax badan qaadan . Lugahaaga toosan oo xaji booska 5 ilaa 10 neefsasho qoto dheer. Ku celi inta jeer ee aad isleedahay waa lagama maarmaan.
4. Jimicsi ku saabsan muruqyada xabadka ugu dhejinaya ruushka
Xadhka xumbada ayaa noqon kara aalad aad u wanaagsan oo lagu furfuri karo wax yar inta u dhexeysa garbaha garbaha iyo dhabarka kore. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu kala bixiyo murqahaaga - sida layligan oo si fiican ugu fidaya muruqyada laabta / pectoralis.
Waa tan sida loo sameeyo layliga: U jiifso furka xumbada si aad u taageerto qoorta iyo dhabarka labadaba. Fadlan la soco in tani kaliya la shaqeyso rollersar xumbo weyn leh (sida this) oo dhererkeedu yahay 90 cm ama ka badan. Ka dib gacmahaaga si tartiib ah ugu fidso dhinaca una dhaqaaq xagga sare illaa aad ka dareento inay u fidsan tahay muruqyada laabta. Ku hay booska 30 - 60 ilbiriqsi ka dibna naso. Ku celi 3-4 nooc.
5. Jimicsi is-fidin ah oo qotodheer (Kala-bixinta murqaha dhinacyada lafdhabarta)
Muruqyada ka shaqeysa dhinac kasta ee laf dhabarta waxaa loo yaqaan 'paraspinal musculature' - ka dib maalin dheer oo shaqo taagan ah, way fiicnaan kartaa in tan loogu kala bixiyo si deggan. Kani waa jimicsi is-fidin oo aad u nasasho badan una fiican dhabarka, qoorta iyo garbaha.
Waa tan sida loo sameeyo layliga: Jilibkaaga istaag oo jirkaaga horey u fidi gacmahaaga fidsan. Madaxaaga ku hay dhulka oo gacmahaaga ku kala fidiyo hortaada ilaa aad dareento fiditaan yar oo ah wareejinta qoorta iyo dhabarka kore. Wuxuu sameeyaa 3-4 set oo ah 30 ilbiriqsi.
Halkan waxaa ah 5 jimicsi oo loogu talagalay xasaradda muruqyada qoorta iyo garabka. Muruqyada adag iyo murqaha qoorta iyo garabka waa caadi. Layligani waxay kaa caawin karaan inaad naaqusto murqaha isla markaana aad kordhiso dhaqdhaqaaqa. Tababarku waa inuu ku habboon yahay shakhsiga.
Is-Caawinta Is-talinta ee Murqaha Xanuunka iyo Xanuunka daba-dheer
PAGE Next: Waa inaad Wax Ka Ogaato Osteoarthritis of Neck
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan farriimaha iyo su'aalaha 24 saac gudahood.)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Øvelser-mot-muskelspenninger-i-nakke-og-skulder.jpg?media=1648573622 562 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2017-03-26 12:01:422021-03-27 13:05:075 Layliyo ka dhan ah Murqaha Murqaha garabka iyo Garabka
Qoorgooyaha | Gubashada xanuunka lugta gudaheeda iyo canqowga 8 Faa'iidooyinka Caafimaadka Phenomenal Caafimaadka Cunista saliidda saytuunka